Ụbọchị My Pet » Ihe Mere I Kwesịrị Gbalịa mkpapụ Ònye Bụ bụghị gị Ụdị
emelitere ikpeazụ: Jun. 03 2020 | 2 min agụ
Mgbe ndị ahụ ugboro ebe ndị enyi gị ma ọ bụ ezinụlọ, ọkụ n'obi gị elu na ụbọchị na onye ha maara, ịjụ ihe ụdị onye ị na-aga n'ihi?
Fọrọ nke nta onye ọ bụla ikpe mara nke ya-na-azọrọ na ha nwere ụfọdụ ụdị ụdị ma ọ bụ mmasị nke onye.
M na-anụ mmadụ na-ekwu banyere ya mgbe niile: "M naanị ụbọchị nka-ụdị ndị n'ihi na m onye na-ese" ma ọ bụ "m na-ahọrọ ka ụbọchị ndị yiri ọrụ n'ubi dị ka onwe m."
Ma, ọ bụrụ na ị na-anọ na ya na a oké catch n'ihi na ha adịghị dabara gị "ezigbo ụdị"?
Nke a nwere ike ime eme pụtara mgbe, karịsịa na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ị na-abịa gafee a profaịlụ na catches anya gị, ma mgbe na-agụ ha stats ị ngwa ngwa ịga na n'ihi na ọ dịghị kwado gị ezigbo nwunye checklist. Ya mere, gị ụdị bụ ogologo, muscular ndị ikom ma ya profaịlụ-ekwu na ọ bụ naanị 5'6 "na nanị moderately mmasị mmega ma ọ bụ gị ụdị bụ keisi ocha, Eastern European inyom na ọ bụ a Dave Australian. Unu na-akpaghị aka dee onye anya n'ihi na ha adịghị ozugbo na-egosi a egwuregwu.
Gịnị mere na ị dị mkpa ka ị na-akpa a kpọmkwem ụdị onye?
Ị ga ịmepụta njikọ na onye dabeere na yiri ọdịmma, nkwenkwe na ihe mgbaru ọsọ. Ọ bụrụ na ị na-eche nnọọ na ịchọta onye dabara kpọmkwem ụkpụrụ nduzi na ị chọrọ agbaso mgbe akpa, i nwere ike na-sabotaging gị Ohere na nwere ewu a oké mmekọrịta.
Mgbe ị na ka onwe gị na-akpa gị ụdị, i nwere ike dị nnọọ na-ekwughachi ochie ihe nakawa etu esi. Ọ bụrụ na ị dere otu ụdị onye maka afọ iri gara aga na onye ọ bụla nke mmekọrịta na-arụ ọrụ si, ikekwe ị kwesịrị ị na-echegharị echiche dị nnọọ nanị akpa gị họọrọ ụdị. Mgbe ị na-akpa otu ụdị onye n'elu na n'elu, mmekọrịta na-emekarị nwere otu ọgwụgwụ results.
Akpa a kpọmkwem ụdị pụrụ ịghọ ọma na prediktebul. Akpa onye na-abụghị gị ụdị, onye dị iche iche, nwere ike ikwe ka ị ohere na-agbalị ihe ọhụrụ ma na-enweta ndụ ọhụrụ ahụmahụ. Ọ bụrụ na ị na-agbalị na-akpa onye nwere dị iche iche ihe omume ntụrụndụ karịa onwe gị, i nwere ike na-agbalị ọhụrụ-eme mmemme ị nwere ike obi ụtọ. Mkpapụ si dị iche iche ihe nketa karịa gị onwe gị nwere ike ekwe ka ị na-enweta ọhụrụ oriri na omenala.
Iji doo anya, M ekwu na ị na-agbalị na-akpa ndị mmadụ na-ekere òkè ọzọ yiri esịtidem isi ụkpụrụ gị (dị ka ẹkemede ndiberi edem, ikwesị ntụkwasị obi ma ọ bụ mmesapụ aka), ka megide ị na-ahọrọ ndị ọzọ dabeere mpụga ihe (dị ka ọdịdị, Agbụrụ ma ọ bụ ọnọdụ mmadụ). Ị ga-arapara n'ahụ na-achụ mmekọ na-ekere òkè yiri isi ụkpụrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ dajụọ a afọ ole na ole na a ezinụlọ, adịghị uyomima ndị na-enweghị oké ọchịchọ na-amalite a ezinụlọ. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-ahụ onye na-ghara kwado gị ezigbo ụdị onye ahụ, ma unu na-akọrọ ogologo oge mgbaru ọsọ na nkwenkwe, ma eleghị anya, ị kwesịrị ị na-enye ha ohere.
Ka emechara, na ị dị nnọọ mgbe mara ndị gị zuru okè egwuregwu nwere ike ịbụ.